Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ချစ်စရာစက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ချစ်စရာစက်ဘီးဘဲလ် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ချစ်စရာစက်ဘီးဘဲလ် ဖန်တီးထားသောပစ္စည်းမျိုးစုံကိုကမ်းလှမ်းခြင်းသည်သူတို့၏အရည်အသွေးအခြေခံအင်္ဂါရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကိုဖန်တီးရာတွင်စစ်မှန်သောပစ္စည်းများသာအသုံးပြုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အဆင့်အတန်းခွဲခြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောအဆောက်အအုံများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျေနပ်အောင်လုပ်ရပါအာမခံပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါက
, သင့်ကိုငါတို့ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အစောပိုင်းပြန်ကြားချက်ကိုငါပေးမည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်အတွက်စိတ်ဝင်စားသို့မဟုတ်သင်စုံစမ်းရေးချင်တယ်ဆိုရင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဒါမှမဟုတ်သင်အကြှနျုပျတို့အားအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကို Join!
ပုံစံ - JH-806
ထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10pc/box 200pcs/ctn.၁.၆ အုပ်.
ဆး.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၂ ကီလိုဂရမ်
22MM Pipe Handlebar အတွက် Santa Claus ပုံနှိပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပါ ၀ င်သောစက်ဘီး Ring Ring
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်:စက်ဘီးများအတွက်လက်ကိုင်ပြွန်အပြင်ဘက်အချင်းသည် ၂၂ မီလီမီတာရှိသည်.ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဝက်အူလှည့်ကိုလက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်လိုက်ပါ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/cute-bicycle-bell.html
သို့: JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD.
ချစ်စရာစက်ဘီးဘဲလ် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ ချစ်စရာစက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ ချစ်စရာစက်ဘီးဘဲလ် ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
ITEM:MINI ALLOY BELL ဖြစ်သည်SIZE:28 MMမူရင်း:ထိုင်ဝမ်မှာလုပ်ပါထုပ်ပိုးသည်:1 pc/အိတ်,20 PCs/box 200 PCs/ctnဆး.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:8 KGS CUFT:၁.၁ ချိန်ညှိနိုင်သောစက်ဘီးခေါင်းလောင်း:၃-သားရေကွင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား ၂ ခုနှင့်အလွှာချိတ်,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းချိန်ညှိရန်လွယ်ကူသည်;အချင်း ၂၂ မှစက်ဘီးလက်ကိုင်အများစုအတွက်သင့်တော်သည်-၃၅ မီလီမီတာ/၀ ယ်သည်.၈၇-၁.၃၈ လက်မ;၎င်းသည်ကွဲပြားသောစက်ဘီးများနှင့်သက်ဆိုင်သည် အရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်းများ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအလူမီနီယမ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် ပြတ်သားပြီးကျယ်လောင်သောအသံ:စက်ဘီးမြည်သံသည်ကျယ်လောင်သာယာစေသည်”Ding”အသံ,အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိလူများအလွယ်တကူနားလည်နိုင်ပြီးအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်,သင့်အားလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုယူဆောင်လာသည် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်:တပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်ကိရိယာများမလိုအပ်ပါ;၎င်းကို ၁ မိနစ်အတွင်းလက်ကိုင်တွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည် ကျယ်ပြန့် applications များ:universal စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်လမ်းစက်ဘီးနှင့်လိုက်ဖက်သည်,တောင်တက်စက်ဘီး,မြို့စက်ဘီး,အားကစားစက်ဘီး,ကလေး’စက်ဘီး,ခရူဇာစက်ဘီး,MTB စက်ဘီး,BMX စက်ဘီး,လျှပ်စစ် Scooter,စသည်တို့.,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်,သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကိုလက်တွေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပါ
ပစ္စည်း:ထိပ်တန်း-အလွိုင်း,အခြေခံပလပ်စတစ်.အရွယ်အစား:၃၄ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,20 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၁.၁ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:5 KGS G.ဒဗလျူ.:7 KGS ဖန်စီ&ဖန်တီးမှုကာတွန်းပုံစံ&ဒီဇိုင်း–ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်လူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်.လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ဂန္ထဝင်လူမီနီယံခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတာရှည်ခံ။ လှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
ပစ္စည်း:ပလပ်စတစ်အောက်ခံနှင့်လီဗာ.အရွယ်အစား:၅၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10pc/box 200pcs/ctn.၂.၂ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:8 KGS G.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ် 22MM Pipe Handlebar အတွက်ကနေဒါအလံပုံနှိပ်စက်အသုံးအဆောင်နှင့်စက်ဘီးဘဲလ် သတိပေးချက်ဘဲလ်:အလူမီနီယံစက်ဘီးလက်စွပ်ခေါင်းလောင်းကိုလုံခြုံရေးသတိပေးခေါင်းလောင်းအဖြစ်တောင်တက်စက်ဘီးများနှင့်လမ်းဘီးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်. တာရှည်ခံအသုံးပြုမှုအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအလူမီနီယမ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည် တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်:စက်ဘီးများအတွက်လက်ကိုင်ပြွန်အပြင်ဘက်အချင်းသည် ၂၂ မီလီမီတာရှိသည်.ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဝက်အူလှည့်ကိုလက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်လိုက်ပါ. CRISP တီးမှုတ်သံကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာနားထောင်ပါ:ဖက်ရှင်အမြင်နှင့်အတူအလူမီနီယံစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံမြည်သံကိုအမြဲပေးသည်
ပစ္စည်း:ပလပ်စတစ်အောက်ခံနှင့်လီဗာ.အရွယ်အစား:၅၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10pc/box 200pcs/ctn.၂.၂ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:8 KGS G.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ် 22MM Pipe Handlebar အတွက်စက်ဘီး Ring Ring Accessory သတိပေးချက်ဘဲလ်:အလူမီနီယံစက်ဘီးလက်စွပ်ခေါင်းလောင်းကိုလုံခြုံရေးသတိပေးခေါင်းလောင်းအဖြစ်တောင်တက်စက်ဘီးများနှင့်လမ်းဘီးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်. တာရှည်ခံအသုံးပြုမှုအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအလူမီနီယမ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည် တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်:စက်ဘီးများအတွက်လက်ကိုင်ပြွန်အပြင်ဘက်အချင်းသည် ၂၂ မီလီမီတာရှိသည်.ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဝက်အူလှည့်ကိုလက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်လိုက်ပါ. CRISP တီးမှုတ်သံကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာနားထောင်ပါ:ဖက်ရှင်အမြင်နှင့်အတူအလူမီနီယံစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံမြည်သံကိုအမြဲပေးသည်
Cute Bicycle Bell	| Sonnette Vélo Rigolote	| Fahrradglocke Laut	| МИлый Велосипедный Звонок	| Sino De Bicicleta Bonitinho	| Campanello Per Bicicletta Carino	| प्यारा साइकिल बेल	| Linda Campana De Bicicleta	| Leuke fietsbel	| جرس دراجة لطيف	| Chuông xe đạp dễ thương	| กระดิ่งจักรยานน่ารัก	| Lonceng Sepeda Lucu	| কিউট সাইকেল বেল	| sevimli bisiklet zili